Lalao « Airtel » – Hafatra an-tariby roa, nahazoana fiara iray - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lalao « Airtel » – Hafatra an-tariby roa, nahazoana fiara iray
Nitsikian’ny vintana. Hafaliana ny an-dRakoto- nantoanina Andriantahiry nahazo fiara tao anatin’ny fahanterany. 70 taona ity raim-pianakaviana ity. Izy no isan’ireo mpanjifan’ny orinasam-pifandraisana Airtel nitsikian’ny vintana, ka nahazo ilay fiara Chevrolet Spark, nandritra ny lalao «Chooze your prize» natao teo anelanelan’ny 28 febroary 2012 hatramin’ ny 27 mey lasa teo.
Hafatra an-tariby roa no nalefany ka nahazoany io loka lehibe io. Mpilalao 30 mianadahy izy ireo no niara-nahazo loka tamin’ izany ka ireo niara-nahazo loka tamin’ity raim-pianaka- viana ity dia nampidirana vola tany amin’ny kaonty Airtel Money-ny.
Tsy sarotra ny lalao. Mamaly ny fanontaniana apetraky ny Airtel amin’ ny hafatra an-tariby dia mety hahazo fiara toa an-dRakotonantoanina Andriantahiry.
Airtel, Lalao, Mpanoratra Rijakely, 16.06.2012, 08:52	FIARAHAMONINA